China 330kV tilikambo fampitana lohan-droa fanamboarana sy orinasa | XY Tower
330kV tilikambo fampitana doble roa
Fotodrafitrasa XY Tower
Mpitantana aorian'ny varotra no tendrena hanao serivisy aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifa.
Hanome torolàlana fonosana sy sary fametrahana ho an'ny mpanjifa izahay izay afaka manampy ny ekipa mpanao trano hametraka tilikambo.
Raha sendra misy olana ny ekipa mpanao fananganana rehefa manangona ny tilikambo izy ireo, dia mila fanampiana arak'izay tratranay izahay. Ny fanolorana azy dia afaka manome torolàlana amin'ny alàlan'ny fifandraisana video na fomba hafa.
Ho an'ny tetikasa sasany, dia hanomana sombin-vokatra vitsivitsy ho an'ny mpanjifa maimaim-poana izahay hisorohana ny toe-javatra tsy ampoizina.
Ny fotoana fiantohana ny vokatra dia 50 taona.
Previous: 330kV tilikambo misy tadiny roa
Manaraka: 330kV tilikambo M-type M
Tilikambo fampitana herinaratra
Tanjaka famindrana herinaratra
Famindrana Tower Design
Karazana herinaratra fandefasana